मलाला युसुफजाईको खुलासा उनले कसरी विवाहको बारेमा आफ्नो मन परिवर्तन गरिन - Sudurpaschim Online
पाकिस्तानकी प्रसिद्ध महिला अधिकारकर्मी र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईले आफ्नो विवाहपछि बेलायती फेसन म्यागजिन वोगका लागि आफ्नो पहिलो लेख लेखेकी छिन् । २४ वर्षीया मलालाले नोभेम्बर ९ मा बर्मिङ्घममा असर मलिकसँग विवाह गरेकी थिइन् ।
वोग म्यागजिनमा आफ्नो विवाहको बारेमा लेखिएको लेखमा उनले आफू विवाहलाई संस्थाका रूपमा विश्वास नगर्ने तर उनका पार्टनर असर मलिकले आफ्नो सोच परिवर्तन गरेको बताएकी छन् ।
म ३५ वर्षको उमेरअघि बिहे गर्न चाहन्नँथे । पछिल्ला केही वर्षमा जब पनि मलाई सम्बन्धका बारेमा प्रश्न सोधिन्थ्यो, मेरो जवाफ यही हुन्थ्यो।
म विवाहको विरुद्धमा थिइनँ, तर म यसबारे धेरै सचेत थिएँ। एउटा संस्थाको हैसियतमा मैले यसको पछाडिको पितृसत्तात्मक परिवार र परम्परा को बिरुद्ध आवाज उठाउथे, विवाहपछि महिलाहरूबाट अपेक्षित हुने परम्पराहरूबारे प्रश्न उठाएँ। संसारका धेरै भागहरूमा, यस सम्बन्धसँग सम्बन्धित कानूनहरू पनि संस्कृति र महिला विरोधी सोचबाट प्रभावित छन्।
मलाई मेरो मानवता, स्वतन्त्रता र नारीत्व गुमाउने डर थियो, त्यसैले मैले विवाहलाई बेवास्ता गर्ने निर्णय गरें।
यदि मसँग कुनै शंका वा प्रश्नहरू छैनन् भने म आफूलाई नारीवादी भन्न सक्दिन। गर्ल्स नट ब्राइड्स नामक संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार हरेक वर्ष १२ करोड युवतीको १८ वर्ष मुनिको विवाह हुने गरेको छ । यी अधिकांश महिलाहरूको लागि, विवाह सुखी साझेदारी होइन तर दासता हो।
म उत्तरी पाकिस्तानमा हुर्किएँ, जहाँ यो सिकाइएको थियो कि विवाह एक स्वतन्त्र जीवन बिताउनको लागि एक विकल्प हो, यदि तपाईंले अध्ययन गर्नुभएन, काम गर्नुहुन्न र आफैं योग्य हुनुहुन्न भने तपाईंले चाँडै विवाह गर्नुपर्छ। परीक्षामा फेल भयो भने ? जागिर छैन भने बिहे गर ।
मसँग हुर्केका धेरै केटीहरूलाई आफ्नो करियरको बारेमा आफैं निर्णय गर्ने मौका पनि दिइएन र विवाह नै गरियो।
मेरी एउटी साथी आमा बन्दा १४ वर्षकी थिइन् । केही केटीहरूले आफ्नो परिवारको खर्च वहन गर्न नसक्दा विद्यालय छोड्नुपरेको थियो, केहीले विद्यालय जान थालेका थिए तर आफ्नो परिवारको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन्। उनका आमाबाबुले निर्णय गरे कि उनको शिक्षामा पैसा खर्च गर्न लायक छैन।
यी केटीहरूको लागि विवाह भनेको उनीहरूको जीवनको असफलता हो। उनी अझै स्कुल जाने उमेरमा छिन् तर आफूले देखेको सपना पूरा गर्ने मौका नपाउने थाहा छ ।
जब सिरिन केलले गत जुलाईमा ब्रिटिश वोग अखबारको कभर स्टोरीको लागि एक अन्तर्वार्तामा मलाई मेरो सम्बन्धको बारेमा प्रश्नहरू सोधे, मैले त्यही जवाफ दिए जो पहिले पनि धेरै पटक दिएको दिएँ। मैले मेरा दिदीबहिनीहरूको कालो वास्तविकता थाहा पाएपछि मलाई विवाहको सिद्धान्तमा विश्वास गर्न धेरै गाह्रो थियो। मैले भनेकी थिएँ– म सायद बिहेको लागि बनेकी होइन ।
तर के अर्को तरिका छ भने? शिक्षा, चेतना र सशक्तिकरणको साथ, हामीले धेरै सामाजिक मान्यता र अभ्यासहरू साथै विवाहका सिद्धान्तहरूलाई पुन: परिभाषित गर्न र सम्बन्धको नयाँ संरचना सिर्जना गर्न सक्छौं। संस्कृति मानिसबाट बनेको हो र यसलाई मानिसले मात्र परिवर्तन गर्न सक्छ।
मेरो साथी, मेरो सल्लाहकार र अहिले मेरो पार्टनर असरसँगको मेरो कुराकानीले मलाई विवाह सम्बन्धमा पनि मेरो मूल्यमान्यता – समानता, निष्पक्षता र अखण्डतामा कसरी सत्य रहन सक्छु भनेर बुझ्न मद्दत गर्‍यो।
सन् २०१८ को गर्मीको समय उ साथीलाई भेट्न असर अक्सफोर्ड आएको थियो जब हामी दुवै भेट्यौं। उहाँ क्रिकेट जगतमा काम गर्नुहुन्छ, त्यसैले मसँग उहाँसँग धेरै कुरा गर्नू थियो। उसलाई मेरो रमाइलो शैली मन पर्यो र हामी धेरै राम्रो साथी भयौं। हामीले फेला पार्‍यौं कि हाम्रा मूल्यहरू समान छन् र हामी दुवैलाई एकअर्काको बनी मन पर्छ। हामी दुबै एकअर्काको सुख र दु:खको घडीमा सँगै उभियौं।
उतारचढावमा पनि हामी एकअर्कासँग कुरा गर्थ्यौं र एकअर्काको कुरा सुन्यौं । जब शब्दहरूले काम गरेनन्, म उसलाई एक लिङ्क पठाउथे जुन जो हाम्रो राशि चक्रको आधारमा एकअर्कासँग कत्तिको मिल्दोजुल्दो छौँ, तारा र राशि चिन्हहरूले हाम्रो सम्बन्धलाई बलियो बनाउने आशामा।
असरमा मैले एक धेरै असल साथी र साथी पाएको छु। मसँग अझै पनि महिलाहरूले सामना गर्ने सबै चुनौतीहरूको जवाफ छैन – तर म पक्का छु कि मैले वैवाहिक सम्बन्धमा मित्रता, प्रेम र समानता पाउनेछु। त्यसैले मङ्गलबार ९ नोभेम्बरमा हामीले हाम्रो परिवार र नजिकका साथीहरूसँग बर्मिङ्घममा विवाह गर्‍यौं।
यो एउटा सानो समारोह थियो जुन सबैले मिलेर सम्भव भयो। मेरी आमा र उनको साथीले लाहोरबाट मलाई विवाहको पोशाक ल्याउनुभयो। असरकी आमा र बहिनीले मलाई बिहेको दिन लगाएका गहना दिए । मेरो बुबाले सजावट र खानाको व्यवस्था गर्नुभयो। मेरो सहायकले फोटोग्राफर र मेरो मेकअपको व्यवस्था गर्यो।
अक्सफोर्ड र स्कूलका मेरा तीन नजिकका साथीहरूले छुट्टी लिएर र कार्यक्रममा भाग लिए। म आफैंले आफ्नो हातमा मेहंदी लगाएँ र थाहा पाएँ कि मेरो परिवार र साथीहरू मध्ये म मात्र एक हुँ जसलाई मेहंदी लगाउने तरिका थाहा छ। असर र मैले विवाहको अघिल्लो दिन उनको गुलाबी टाई, पकेट घुमाउरो र मेरो चप्पल लिन मलमा घण्टा बितायौं।
( बीबीसी बाट अनुवाद गरीएको )
Tagged: मलाला युसुफजाई
Previous मेरो गणना – मेरो सहभागिता – राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी पूरा
Next अब नेटफ्लिक्समा रिलिज हुँदैछ सूर्यवंशी